Aghụghọ na-esi melite web loading ọsọ | ECommerce ozi ọma
Taa, ịnweta weebụsaịtị na-aghọ ihe dị mkpa. Mana nke a gụnyere ịmara aghụghọ iji mee ka ndị ọrụ mara mma, dị mfe iji, na-anabata (ya bụ, ọ dị mma na ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụghị naanị kọmputa ahụ) ... ma nwekwaa oke ntanetị zuru oke.
Ọ bụkwa ebe a ka ị na-eme mmehie. Mgbe peeji adaghị ibu ngwa ngwa, onye ọrụ na-eche na ike gwụrụ ya ichere ma hapụ ya. Ya mere, ka o wee ghara ime gị, anyị na-aga ekwu okwu banyere otu esi emeziwanye web loading ọsọ.
1 Gịnị bụ web loading ọsọ?
1.1 Olee otú m pụrụ isi mara web loading ọsọ?
2 Gịnị na-ebelata ọsọ ọsọ nke weebụsaịtị m
2.1 Họrọ ezigbo nnabata nnabata
2.2 Kpachara anya na ndebiri peeji
2.3 Foto dị arọ
2.4 Kpachara anya maka plugins
3 Tfọdụ aghụghọ iji melite ọsọ ọsọ weebụ
3.1 Họrọ ezigbo nnabata
3.2 Kpochapụ peeji gị
3.3 Mụta iji bulie onyonyo
3.4 A doro anya, mfe na minimalist imewe
Gịnị bụ web loading ọsọ?
Enwere ike ịkọwa ọsọ ọsọ ọsọ dị ka ike nke weebụsaịtị iji gosi onwe ya na obere nkeji. Nọmba dị elu, ogologo oge ọ na-ewe iji gosipụta zuru ezu. Nke ahụ abụghị naanị na ọ na-ewute nchọgharị onye ọrụ, kamakwa ọ nwere nsonaazụ na ọkwa ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ibe anaghị enwe ọsọ zuru oke, Google agaghị enyere gị aka ịnye ọkwa. Igwe nyocha, n'ihi algorithm ya, chọrọ ịdị ngwa ngwa ma nwee peeji nke anaghị ebu ngwa ngwa anaghị erite uru ọ bụla, mana na ntụle.
Na mgbakwunye, ị ga-enwe obere nleta, nke ga-ebelata ahịa gị, mgbasa ozi gị ... N'aka ozo, obu otu n'ime nsogbu kachasi mkpa idozi ozugbo enwere ike.
Olee otú m pụrụ isi mara web loading ọsọ?
Iji mara ma ibe weebụ gị nwere ọsọ zuru oke, ọ dịghị mkpa itinye tebụl wee mepee ya iji lelee ya. Enwere ngwa ngwa ngwa, ụfọdụ akwụghị ụgwọ ụfọdụ akwụ ụgwọ. Mana n'okwu a, ndị anyị na-akwado bụ ndị a:
webpagetest (ọkacha mmasị m)
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile ha ga-enye gị ọkwa nke ga-esi na 0 gaa na 100, ma ọ bụ site na F ruo A. Ka ọ na-agba ọsọ ọsọ, obere nsogbu ihe niile ga-enye gị.
Gịnị na-ebelata ọsọ ọsọ nke weebụsaịtị m
Ugbu a na ị matara mkpa ọ dị nke ibe weebụ mmeghe ngwa ngwa, ị ga-amata ihe kpatara ọ ga - eji nwayọ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike idozi nsogbu ahụ ma weghachite ọnọdụ ị nwere na injin nchọta, yana ndị ọrụ na ego.
na isi nsogbu na-ebilite metụtara ọsọ bụ:
Họrọ ezigbo nnabata nnabata
Mgbe ị na -emepụta ibe weebụ, ị ga-achọ isi ihe abụọ: url na nnabata iji bulite faịlụ peeji ahụ wee gosipụta ya na Internetntanetị. Enwere ike ịzụta ma onye nke ọzọ n'efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ. Mana e nwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti ha abụọ.
N'ihe banyere n'efu, anyị na-ekwu maka Bochum a ga-ekerịta, nke nwere mgbasa ozi ... ya bụ, na ọ bụ nnabata a na-ebubiga ókè na ọ ga-aga nwayọ (n'ihi na ha na-ebute ibe weebụ ahụ ụzọ azụtala "adịchaghị" nnabata ". N'ihi ya, ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị ka ibe gị wee nwayọ, oge ụfọdụ anaghị egosipụta, ma ọ bụ nye nsogbu.
N'ebe a na-akwụ ụgwọ akwụ ụgwọ, ọ bụ ezie na ọ bụ mmefu akụ na ụba ka ị na-eme ka ewebata ibe gị ma nwee ọsọ ọsọ zuru oke, eziokwu bụ na enwere ike nwee nsogbu. Dịka ọmụmaatụ, ịkekọrịta Bochum (yabụ na ọ dị ọnụ ala), ihe nkesa na-ebuwanye nwayọ, ma ọ bụ ọbụna nwee nsogbu njikọ na-eme ka ibe gị gbadaa.
Kpachara anya na ndebiri peeji
Foto dị arọ
Otu n'ime ọdịda ndị kachasị ama. Ma ọ bụ na mgbe ụfọdụ anyị chọrọ onyonyo nwere ezigbo mkpebi maka ntanetị. Mana nke ahụ na-egosi na ha buru oke ibu. Ma mgbe ị jiri blọgụ gị jiri ihe oyiyi niile ahụ, na njedebe loading ọsọ na-ata ahụhụ.
Kpachara anya maka plugins
The more plugins you put on a website, ka ihe web loading ọsọ ga-ata ahụhụ. N'ụzọ dị mma, ị nwere ngwa mgbakwunye iji chọpụta nke ndị na-eme ngwa ngwa na iji nwee ike ịgbanwe ha (ma ọ bụrụ na ha adịghị mkpa) maka ndị ọzọ.
Tfọdụ aghụghọ iji melite ọsọ ọsọ weebụ
N'ikpeazụ, anyị ga-ahapụrụ gị ụfọdụ aghụghọ nke ndị ọkachamara na-enyere aka iji hụ na nbudata ngwa ngwa nke ibe na-adịkarị mma yana na ahụmịhe ndị ọbịa ga-ezu oke.
Ekele ịntanetị, ị nwere nhọrọ nke ịhụ echiche banyere ụlọ ọrụ nnabata ndị isi, ndị na-arụ ọrụ nke ọma, ndị na-eme njọ ... Ma ị nwekwara ike họrọ n'efu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ.
N'okwu nke abụọ, e nwere ụlọ ọrụ atọ na-apụta, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ peeji niile ka akwadoro na ha. N'ihi ya, ọ na-anwale.
Kpochapụ peeji gị
Kwuo ngwa, ngwa mgbakwunye, foto ... nke anaghị ewetara gị ihe ọ bụla maka weebụ. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ihe niile ga - enyere aka ọsọ ọsọ n'ihi na ị ga - ahapụ ya ka ọ dị ọcha.
Ọzọkwa, ị ga- lelee na ndebiri nke ị na-eji bụ ezigbo ọsọ, na o nweghi akwukwọ nke nwere ike ịdalata ya yana na ọ na-azakwa (nke dị mma na mbadamba, mobiles, pc ...).
Mụta iji bulie onyonyo
Nke ahụ bụ, ịkọwapụta nha ya na-enweghị ida ogo nke ihe oyiyi ahụ. Ugbu a, enwere weebụsaịtị ndị na-enyere gị aka na nke ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe siri ike ịnwefe ihe oyiyi ahụ na weebụsaịtị ọzọ mgbe nbudata ha ma mee "ọrụ abụọ", ọ bara uru.
N'ezie, enwere ike ịnwe nhọrọ na weebụsaịtị gị ka e wee nwee ike ịme ihe ndị a na ngwa mgbakwunye na-enweghị ịme ihe ọ bụla.
A doro anya, mfe na minimalist imewe
Kedu ihe ị chọrọ na weebụsaịtị gị? Naanị ihe dị mkpa. Nke ahụ bụ ebe igodo ya dị. N'ihi na nke ahụ abụghị naanị na ọ na-eme ka ngwa ngwa dịkwuo mma, ọ na-emekwa esenowo ọfiọkde nte ẹkpekụtde se enye oyomde ikpere.
Yabụ ịmeghị ogologo nchịkọta nhọrọ nke ọtụtụ peeji iji chọta ihe ị na-achọ. Mee ka ihe dị mfe dị ka o kwere omume maka ya yana ma web loading ọsọ na ahụmịhe onye ọrụ ga-akawanye mma karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Olee otú ka mma web loading ọsọ